Adeegga Wakiilka ee Diiwaangashan dhammaan Gobollada 50
Wakiilka Diiwaangashan waxaa sharci ah u baahan shirkad ama shirkad deyn xadidan leh oo ku dhawaad ​​dhammaan xukunnada. Wakiilka diiwaangashan wuxuu aqbalaa dukumiintiyada rasmiga ah wuxuuna kaa caawin karaa inuu hubiyo in dukumiintiyo gaar ah la xareeyay si shirkadda loo sii wado. Sidaas oo kale, wakiilka diiwaangashan waa in lagu heli karaa cinwaanka muuqaalka ee ku qoran diiwaannada dadweynaha laga bilaabo 9 am ilaa 5 pm maalmaha shaqada. Shirkadaha Incorporated waxay bixiyaan adeegyo wakiil diiwaangashan dhammaan kontonka gobol iyo dhowr goobood oo dibedda ah. Fadlan la xiriir xiriir si aad wax dheeraad ah uga ogaato adeeggan. Wakiilada diiwaangashan waxaa sharci ahaan u baahan awoodaha badankood.
Shirkadaha Incorporated waxay bixiyaan adeeg bilaash ah wakiilka diiwaangashan oo ay la socdaan dhammaan xirmooyinka isku-darka sannadka ugu horreeya.